अब राष्ट्रपति र संसदलाई भूलेर पनि धम्की नदिनुहोस्, आयो यस्तो कडा नियम ! « Surya Khabar
अब राष्ट्रपति र संसदलाई भूलेर पनि धम्की नदिनुहोस्, आयो यस्तो कडा नियम !
काठमाडौं । जनप्रतिनिधि निकाय संसदलाई काम गर्न बाध्य पार्ने, बल प्रयोग गरेर वा नगरेर धम्की दिनेलाई सात वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ। संसदको विधायन समितिले शुक्रबार पारित गरेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुर संहितामा संसदलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
शनिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, जन्मकैदमा २० वर्ष कैद हुने हाल व्यवस्था रहेपनि विधेयकले ६ वटा अपराधमा भने जीवित हुंदासम्म कैदको व्यवस्था हुने व्यवस्था गरेको छ। क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुवान अपहरण गरी विस्फोटक गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय पदार्थ वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उदेश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा जीवित हुँदासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।